နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: သီချင်းငှက်သို့ အမှတ်ရခြင်း။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:17 PM
ck August 14, 2009 at 2:55 PM
Asamatter of fact, နတ်မိမယ် is of the 4/4 timing.
၁၉၉၅ နှစ်ဦးပိုင် ကိုထူးအိမ်သင်ရဲ့ One Man Show Unplugged Show ကို သိမ်ကြီးဈေးနားက မေဟွားခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတာ - not true. It was done at the Aung San Stadium on 23 Feb.
khin oo may August 14, 2009 at 2:57 PM
- လေးဖြူ က ကမ္ဘာသစ်တေးမှာ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
- ထူးအိမ်သင်က အောင်ရင်၊ ဘိုဘိုတို့နဲ့ တွဲဆိုတဲ့ ဗားရှင်းက စုပေါင်းစပ်ပေါင်း အခွေတစ်ခုထဲမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ထွက်တယ် ထင်ပါရဲ့ (အမှတ်မှားနိုင်ပါတယ်။)
- မှတ်မှတ်ရရ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အန်ပလပ်ဂ် တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးကို အဲဒီတုန်းက သိမ်ကြီးဈေးက မေဟွားခန်းမမှာ လုပ်ခဲ့တာ မှတ်မိတယ်။ ၁၉၉၇ အစလား မသိဘူး။ အဲဒီပွဲမှာ လေးဖြူက ထူးအိမ်သင်နဲ့ တွဲပြီး အမေ့အိမ်ကို တစ်ပိုဒ်စီ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဟာ သီချင်းဆို သမ္ဘာတွေ ကိုယ်စီ ထုတ်ပြတဲ့ ပွဲပဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး အပေးအယူမျှမျှနဲ့ ဆိုသွားတာ။ ကိုဇက်တီ ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ အမ်တီဗွီ ခွေကြမ်းဟာ အဲဒါ ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန် ဆင်းလာတာ နောက်ကျလို့ အဲဒီပွဲကို မကြည့်လိုက်ရဘူး။ စီဒီပဲ ဝယ်နားထောင်ရတယ်။ စီဒီကာဗာက ဟောလိုဂီတာကို အဝါရောင် ခပ်ကဲကဲနဲ့ ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ ပန်းချီလေး။ unplugged ဆိုတဲ့ စာလုံးကို လက်နှိပ်စက် ဖွန့်နဲ့ ရိုက်ထားတာ မှတ်မိတယ်။ အမ်တီဗွီံ ထွက်မလား မျှော်လင့်သေးတယ်။
khin oo may August 14, 2009 at 2:58 PM
khin oo may August 14, 2009 at 2:59 PM
khin oo may August 14, 2009 at 3:00 PM
khin oo may August 14, 2009 at 3:02 PM
Posted by မေငြိမ်း at 10:31:00 AM
Ko Boyz August 14, 2009 at 3:04 PM
- အမှန်ပြင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစီကေ။ ပို့စ်မှာ ပြင်ဆင်ချက် ထည့်လိုက်ပါပြီ။
- အန်တီ ခင်ဦးမေ - တော်တော့်ကို မယ်စံရှား ပီသပါပေတယ်။
khin oo may August 14, 2009 at 3:07 PM
khin oo may August 14, 2009 at 3:08 PM
khin oo may August 14, 2009 at 3:17 PM
maylay August 14, 2009 at 3:42 PM
ကိုကြီး ကျေးဇူး နော်။ ထူးအိမ်သင် သီချင်းသံကို ဘယ်သူနဲ့တွဲဆိုဆို နားကဘက်လိုက်တယ် လို့ပြောခံရအောင်ကို မေလေးက ကြိုက်တယ်။
khin oo may August 14, 2009 at 4:01 PM
Boyz: နောက်ပြီးတော့ ထစ်ချုန်းမိုး ခွေထဲမှာလား မသိဘူး။ ဆိုင်ကယ် စက်သံကို ထည့်ထားတာလေး။ ဒီကမ္ဘာမှာ ကောက်ကျစ်မှုတို့ မရှိတဲ့ ချစ်နယ်မြေသစ် အနာဂတ်သစ်ဆီ တွဲခေါ် ဆိုတာလေး။
Boyz: တို့က.. အဝေး အဝေး အဝေး... ဆိုတာကို တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက် ဆိုသွားတာကို ပိုသဘောကျတယ်။
သစ်သစ်: နန်းညီ ပို့စ်မှာ အမ်ပီသရီးသီချင်းဘယ်လိုတင်လဲဟင် သစ်တင်ချင်လို့ သိရင်မျှပါဦး
Boyz: ပုသိမ်ရေးလိုက် ပြည်ရေးလိုက် ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်က ဘယ်လို ပါလာတာလဲ မသိဘူး။ ပြင်လိုက်ပြီ။ ကျေးဇူး ဆင်ဆင်
14 Aug 09, 15:51
ညီ: ငါ မင်းရှေ့မှာ ကွဲကြေ.. မောဟိုက်ပင်ပန်းလွန်းခဲ့ပြီ .. ဒုက္ခမြစ်များသာ စီးဝင်ရာဟာ ငါကိုယ်တိုင်လားကွာ.. အဆိပ်ရည်များစီးနေ အရှည်လျားဆုံးမြစ်ဟာ ငါ့ရဲ့ဝိဥာဉ်လား
သစ်သစ်: သစ်က ကိုယ်အလိုချင်ခဲ့ဆုံးအရာ ဘ၀မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ ...အဲဒီစာသားကိုကြိုက်တာ
14 Aug 09, 15:50
ညီ: သစ် ဆိုပြတဲ့သီချင်းမှာ.. နောက်ဆုံးအပီးသတ်နားလေး “ဝေးးးး.........” ဆိုပီး အော်တာလေး ခိုက်တာ
Boyz: ထူးအိမ်သင် အကုန်ကြိုက်တယ် ညီ
Boyz: နန်းညီ။ တာရာသီချင်းတွေတော့ မရှိဘူး။ မြန်မာအမ်ပီသရီးထဲမှာတော့ ပြန်ရှာပေးမယ်။ ရှိရင် ပြန်မျှပေးမယ်
ညီ: အရင်ရက်တွေက သတိမရဘဲ ခုမှ သတိရကြတဲ့သဘောပေါ့နော်.. ဒါထက် “ဒုက္ခမြစ်များ”ကို မကြိုက်ကြဘူးလား သိပ်မပြောကြလို့
14 Aug 09, 15:49
Boyz: ဟုတ်တယ်။ မဟေသီမှာ အခန်းဆက် ပါဖူးတယ် ဆင်ဆင်။
သစ်သစ်: မဆုံနိုင်တော့ဘူးကွယ် မင်းကိုကိုယ်ချစ်ခဲ့တယ် ဆွေး.....ဆွေး ရက်စက်တဲ့ ကံကြမ္မာကိုပဲ သိပ်နာကျည်းတယ် ...နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် အချစ်ရယ် ကိုယ်သွားပြီကွယ်.....အကြိုက်ဆုံးထူးအိမ်သင်သီချင်းလေး
14 Aug 09, 15:42
sdl: ဟေ့ ကိုဘ ပုသိမ်က ကန်သုံးဆင့်ထင်တယ်... မဟေသီက ကိုငှက်အကြောင်းစောင့်ဖတ်ဖူးတယ်...။ သူ့အမေပုံတွေ ပါတယ်လေ
ညီ: mp3 ရှိရင် မျှပါဦးဗျ.. မှန်အိမ်လေးခွေလည်း ပျောက်သွားပီး( ..
Boyz: ကွယ်.. ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်ကို ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်တော့ ဖြစ်စေချင်တာ လူ့အတ္တကိုးကွဲ့...။ တာရာက အဲဒီပထမခွေ ပုလဲသီ တစ်ကွဲစီမှာ အဲဒီ နှစ်ပုဒ် တော်တော်ပေါက်ခဲ့တယ်။
14 Aug 09, 15:35
ညီ: တာရာ့သီချင်းတွေ သိပ်မသိဘူး.. ကိုအောင်တော့ နည်းနည်းပိုသိပါသေး.. စင်ပေါ်မှာ အရက်သောက်တာကတော့ အင်းး ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ မချဉ်ပါနဲ့ဗျ
14 Aug 09, 15:33
Boyz: ဒါပေမယ့် တာရာဆိုတာ ပိုနားထောင်လို့ ကောင်းတယ် အသံချိုတယ်လေ။
Boyz: မသိဘူး သစ်သစ်. မောင်ဝေး ဘာတွေ ပြောမှန်း မသိဘူး။
Boyz: ဟုတ်တယ်။ အယ်နောင်းလဲ ပြန်ဆိုတာ နန်းညီ။
14 Aug 09, 15:23
ညီ: လွမ်းမဆုံးဘူးလား.. အဲ့သီချင်းက နာမည်ကဘာ ? အယ်နောင်းလည်းဆိုသေးသလားလို့နော်
ကြည် August 14, 2009 at 4:19 PM
ပေါက်ပေါက်နဲ့ စုံတွဲဆိုတဲ့ ဝေးသွားတဲ့ခါ ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အမေ့အိမ်ကတော့ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းပါပဲ။ ထူးအိမ်သင်ကိုလွမ်းတယ်။
Ko Boyz August 14, 2009 at 4:27 PM
အဲဒီသီချင်းက တီးတဲ့သူ မကွဲရင် ဆိုတဲ့သူ ကွဲတဲ့ သီချင်းပဲ။
ကိုယ်တစ်ခါသားမယ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဒီသီချင်းကို တန်ဆောင်တိုင်မှာ ဆိုတာ။ နုတ်စ်လိုတော့ သယ်ရင်း ဦးလေး တစ်ယောက်က အရင် နာမည်ကြီး ဝိုင်းရဲ့ ကီးဘုတ် ပလေယာ။ သူ့ဆီမှာ နုတ်သွားတောင်းတော့ သူက စကားပါးလိုက်တာလေ။
နုတ်က မရခဲ့ဘူး။ အသိမ်းလွန်သွားလို့ မရ...။ အဲဒီမှာ ကိုယ်တို့ အတီးတိုက်တော့ tempo ကို Unplugged အခွေထဲက tempo အတိုင်း တိုက်ထားတာ။ ကီးဘုတ်တီးပေးတဲ့ ဆရာသမားကလဲ ဒီသီချင်း ကျွမ်းနေတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ အသံ၊ ကီး ချိန်ပြီး တိုက်တာပေါ့။ အဆင်ပြေနေတာပဲ။ ကိုယ်တို့ကလဲ တိုက်တုန်းက အကောင်းရယ်။ တစ်ကယ့်နေ့လဲ ရောက်ရော ကီးဘုတ်ဆရာက နုတ်လေးတော့ ပေးထားမှ သင့်တော်မယ်ဆိုပြီး လာတောင်းရော။ ဆိုတော့ ရှာလို့ မလွယ်တော့တာနဲ့ ထူးအိမ်သင် တေးပေါင်းချုပ်ထဲက ရှာပေးလိုက်ရတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တိုက်တုန်းက ကိုယ်ပိုင် ကီးဘုတ်။ တစ်ကယ်တီးတော့ တီးဝိုင်းကငှားလာတဲ့ ကီးဘုတ်။ အမျိုးအစားမတူလေတော့ ကီးဘုတ်ဆရာ ခေါင်းကိုက်...။ tempo တွေက တိုက်တုန်းက မမြင့်ဘူး။ တေးပေါင်းချုပ်က tempo က မြင့်နေ။ သူစတီးတာနဲ့ ကိုယ်တို့တော့ ကွဲပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ မအီမလည်ကြီးနဲ့ tempo အမြင့်နဲ့ ဆိုလာလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနှစ်က မောင်ဘွိုင်းတို့ ကွဲတဲ့နှစ်ပေါ့ဗျာ။ ရှက်လိုက်ထှာ။ အောက်ကလူတွေကတော့ လက်ခုပ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးပဲဗျား...။
တော်သေးတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဝိုင်ဝိုင်း၊ ကြိုးကြာ စုံတွဲသီချင်းလေးနဲ့ (ပါးထက်မှာ မင်းမျက်ရည် ဆိုတာလေ..။ အဲဒါနဲ့) ပြန်ပြီးဖာလိုက်လို့ သိပ်မကွဲသွားတာ။ ဟိ
Ko Boyz August 14, 2009 at 4:29 PM
ဒါတောင် ဝိုင်ဝိုင်းသီချင်းမှာ တူတူဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က ကော်ရပ်စ် အပိုဒ်မှာ ကျွန်တော် ဟာမိုနီဆိုတော့ သူက လိုက်ယောင်လာလို့ နောက်ဆုံး သံမှန်နဲ့ပဲ ပြန်ဆိုပေးလိုက်ရတယ်။
ATN August 14, 2009 at 5:03 PM
ကိုဘွိုင်းဇ် သီချင်းဆိုတာ နားထောင်ချင်တယ်ဗျာ... ဆိုပြီးတော့ ဘလော့ပေါ်တင်ပေးပါ...
ဒါနဲ့ BTW ကျနော်တို့ စာတွေ ကဗျာတွေလည်း ကွမ်ယင်မယ်တော်ကြီး သည်ထိအောင် သယ်လာပါလားဗျ...း)
Ko Boyz August 14, 2009 at 5:20 PM
ခပ်တိုင်းငန် ကွမ်ရင်မယ်တော်ပါဗျ။ အစုံကို သယ်လာတော့တာပဲ။
သီချင်းလား။ နောက် ပစ္စည်းကိရိယာ စုံစုံလင်လင် ရှိတဲ့အခါ တင်ပါ့မယ်။ လောလောဆယ် sound card ကြောင်နေတယ်ဗျာ...။
khin oo may August 14, 2009 at 5:24 PM
ဘွိုက် ကပြောကာမှ ပိုဆိုး
khin oo may August 14, 2009 at 5:26 PM
ဘ ကော ပါသကိုး
သက်ဝေ August 14, 2009 at 6:43 PM
အလွမ်းမပြေတဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် လွမ်းလာသေးတာ...
သာမီးတော့ မပါဘူးနော် မမ...
ကြိုက်တာ သယ်သွားလို့ ရတယ်...
(ကိုဘ တို့ အကိုကြီး ကိုအောင်သာငယ်တို့ လို ဟုတ်ဖူး...)
သူတို့ကို နာနာလေး ထုလိုက်ပါ မမ...
MieMie August 14, 2009 at 8:03 PM
ကိုစိုးလွင်လွင်လည်း ကိုငှက်လိုဘဲ သီချင်းမဆိုခင်တုန်းက မူးနေပေမယ့် တကယ်တမ်းဆိုတော့ ပုံမပျက်ဘဲနဲ့ ပြီးအောင်ဆိုပြ
သွားနိုင်တယ်လို့ ကြုံဖူးတဲ့သူကပြောပြလို့ သိခဲ့ရဖူးတယ်...
အနုပညာမှာ သိပ်အားကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးကို
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကိုတာရာဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေ နားထောင်ချင်လို့ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ ရှာလို့တွေ့နိုင်မလဲဆိုတာ သိမယ်ဆိုရင် ဖြေကြားပေးပါရှင့်....ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
သက်ဝေ August 14, 2009 at 8:52 PM
ဘာသာ မတူတာ ဘာကြောင့်လဲ .. တို့တော့ ဒါတွေ နားမလည်... မေရယ် မောင်ရယ် ကံကို ဆိုးတယ်...။
သီချင်းနာမည်က ကာရန်မညီသော ပါ...
ခင်မင်းဇော် August 14, 2009 at 9:08 PM
အဲဒီမှာ သူ့အကြောင်းရေးဖူးတယ် ကဘရဲ့။
သူက အမထက်တော့ အသက်ရော အတန်းရောကြီးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ သူ့ကိုကျော်တက်သွားခဲ့တာ။ အမရန်ကုန်မှာ နေတဲ့ အချိန်တုန်းက ၁၉၉၅ အောင်ဆန်းကွင်းက ရှိုးကို လာကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ပေးလို့ ညီအမ ၂ ယောက်သွားကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ သူက ပုသိမ်လာတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ခဲ့ဘူး။ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့တာပဲ။
ပေါက်ပေါက်ကလဲ ပုသိမ်ကပဲ အခွေမထွက်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပွဲတွေမှာ ဆိုနေကျပေါ့။
စူး August 15, 2009 at 12:08 AM
အာ.. ရေလည်စုံတဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ပို့စ်ပဲ..။
ကျေးဇူးပဲ ..ဒီပို့စ်လေး သိမ်းထားလိုက်တယ်..
khet myint myint August 15, 2009 at 12:59 AM
ကျွန်တော်ကတော့ မျှော်လင့်ချက်သာ မထားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို မှတ်မှတ်ရရ သတိရနေတယ်။ နောက် သင်းကွဲငှက် ဆိုတဲ့ သီချင်း။
Ko Boyz August 15, 2009 at 1:02 AM
မျှော်လင့်ချက်သာ မထားခဲ့ရင်မှာတော့ လုပ်ဆိုမှန်း သိနေပေမယ့် အဲဒီ ခပ်ချွဲချွဲ အသံနဲ့ မတူတူအောင် တုဆိုတာ မှတ်မိသဗျ။
သင်းကွဲငှက်ကို မူရင်းဗားရှင်းပဲ သဘောကျတယ်။ ပြန်ဆိုခွေထဲက ဘာလို့ မကြိုက်လဲ မသိဘူး။ ရင်ထဲကို မထိဘူး။
khet myint myint August 15, 2009 at 1:44 AM
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ မှော်ဆရာအိပ်မက် အခွေကိုမြန်မာကျူးပစ်ထဲ သွားရှာတွေ့လို့ ပြန်ပြီး ရှယ်ပါရစေ။ ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်က myanmarmp3album.com မှာလည်း ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
စည်သူလွင်နဲ့အဲလက်စ်ပြန်ဆိုထားတဲ့ သင်းကွဲငှက်နဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါ အခွေကိုတော့ရှာလို့ တွေ့ဘူးရယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီ့အခွေပြန်နားထောင်ချင်မိသား။
Ko Boyz August 15, 2009 at 1:56 AM
MyanmarMP3 မှာ မြို့ပြလရောင်တမ်းချင်း Series မတွေ့မိသလိုပဲ။
khin oo may August 15, 2009 at 8:36 AM
၂၀၀၄ ခု သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့...
ကလေးများအားလုံးလဲ စာသင်မယ့် ဆရာကိုမျှော်နေတယ်
စာသင်ခုံတွေလဲ ဖရိုဖရဲ ပိုးစား ချကိုက်နဲ့
ခေါင်းလောင်းကြီးလဲ အိပ်ပျော်နေဆဲ အသံမမြည်နိုင်ရှာတယ်
စာအံသံတွေ ကြားချင်ပါတယ် ကွက်လပ်ဖြည့်လိုက်ပေါ့ကွယ်
ကျေးလက်က ဆရာ သူငယ်ချင်းရယ်
ခေါင်းလောင်းကြီး အသံတွေ ချိုမြမယ်
အားလုံးအတွက် တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်မယ့်
ဆေးပေးခန်းထဲ ပင့်ကူတွေလဲ အခိုင်အမာ အိမ်ယာဖွဲ့
လူနာကုတင်တွေလဲ ဖရိုဖရဲ ပိုးစားချကိုက်နဲ့
ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ ဘဝတွေ တကယ်ပဲ ချူခြာနေရှာတယ်
လူတွေ အကုန် ကျန်းမာရေးအတွက် ကွက်လပ် ဖြည့်လိုက်ပေါ့ကွယ်
ကျေးလက်က ဒေါက်တာ သူငယ်ချင်းရယ် စိတ်ဓာတ်လေး ဖြူစင် သန့်ရှင်းတယ်
Sonata Cantata August 19, 2009 at 1:20 PM
ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက တယောက်ထဲသွားကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ စတိတ်ရှိုးညလေးကို ဆို က ရေး တီး... ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးရေးဖြစ်သွားပါတယ်။
(အရင်ကလည်း လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေတင်ရင်လည်း လာအားပေးဦးမှာ...)
Ko Boyz August 19, 2009 at 2:32 PM
အစ်မရေးတဲ့ ဆိုကရေးတီးထဲမှာ ပါတဲ့ အဆိုတော်နာမည်ကြောင့် မအပြုံးပန်းက အဲဒီအဆိုတော် သီချင်းတင်လာတယ်။ ညက ကျွန်တော် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်က ကြားခဲ့ရတဲ့ ရှားပါး သီချင်းလေးပါ။ ၁၉၈၄ တစ်ဝိုက်က ထွက်ခဲ့တယ် ထင်ပါ့။ နောက်ကြီးလာတော့ နားထောင်ချင်လို့ လိုက်ရှာတာ တေးသံသွင်းဆိုင်တွေမှာ မရှိတော့ဘူး။ ခုတော့ မအပြုံးပန်းကျေးဇူး (အစ်မရဲ့ ဆိုကရေးတီး ပိုစ့်သွယ်ဝိုက်ကျေးဇူး လဲ ပါတာပေါ့လေ) ကြောင့် တစ်ကျော့ ပြန်နားထောင်ခွင့်ရတယ်။ ကျောင်းတော်သာ လွိုင်လင် ကို နားထောင်ကြည့်ပါလေ။
khin oo may August 15, 2010 at 12:47 AM
Ko Boyz September 7, 2011 at 8:24 PM